Ladies and Gentleman, Ngenjongo yabasebenzi bonke. Nceda ungaqhubi utywala. Ukusebenza le gig ayifuni kusondela ukuyihlawula. - Ukubala kwe-NYE ye-Djs, i-Vjs, ii-nightclubs ze-2019
SKU: DjDrops-2598 Udidi: DJ Drops
Ladies and Gentleman, Ngenjongo yabasebenzi bonke. Nceda ungaqhubi utywala. Akuyona indlela yokuqalisa i-2018!
Ladies kunye nenene, umnxeba wokugqibela kotywala! (Kuveliswe)